Ibibhalwe Njani? -Ukutya
Ngenye imini uPakelo lwePakethi
Utyelelo lwepakeji yemihla emininzi
Khetha umhla wokuHamba, ukhetho (ukuba lukhona) kunye nenani labantu. Cofa NGEZA KWITSHATHI or INCWADI MANJE.
nqakraza QHUBEKA UPHUME.
*Asterisk kwaye Ulwazi lababekho kufuneka igcwaliswe.
nqakraza Qhubela kwi-PayPal. * Kukho i-5% intlawulo yekhomishini yePaypal.
Jonga i-imeyile yakho kwivawutsha.
Sebenzisa ivawutsha yakho ngomhla obekiweyo.
Nceda ushiye izimvo.
Khetha umhla wokunduluka, Pax kunye nenani labantu.
I-Ex) Ukuba abantu ababini bafuna ukubhukishwa, cofa umhla wakho wokuhamba kwaye ucofe 'kubantu be-2' kwi-PAX inketho. Emva koko cofa 'i-2' ngokhetho loMntu ngamnye.
nqakraza NGEZA KWITSHATHI or INCWADI MANJE.
-Siza kuthumela ivawutsha yokuQinisekisa isiQinisekiso ngaphakathi kweentsuku zeshishini ze3.
-Siza kukuthumela iVoucher yokuQinisekisa isiQinisekiso seVeki kwi-2 kwiiveki ngaphambi komhla wokusuka.
Khetha umhla wokunduluka, Ibanga lehotele, i-Pax kunye nenani labantu.
I-Ex) Ukuba abantu babini bafuna ukubhukishwa, cofa umhla wakho wokuhamba kwaye ucofe ukhetho lwakho kwiBanga lehotele. Emva koko cofa 'kubantu be-2' kukhetho lwe-PAX. Okokugqibela, cofa '2' ngokhetho loMntu ngamnye.
Khetha ukhetho lokuhlawula: idiphozithi nge-PayPal kunye nemali eseleyo kwiKorea okanye intlawulo epheleleyo ngePayPal.
Cofa uQhubeka kwiPayPal. * Kukho i-5% intlawulo yekhomishini yePaypal.
-Siza kuthumela ivawutsha yokuQinisekisa isiQinisekiso ngaphakathi kweentsuku zeshishini ze3
Khetha Umhla wokufika wokufika kunye nenani lemveliso. Cofa NGEZA KWITSHATHI or INCWADI MANJE.
* Umhla wokufika wokufika: Kucetyiswa ukuba ucofe kumhla wokungeniswa kwehotele.
*Unyanzelekile ukuba ugcwalise:
Asterisk kwaye Ulwazi lababekhona
indawo yokuhlala idilesi Indawo yokuhlala inombolo yomnxeba
ihotele Ixesha at Amanqaku oku-odola. (Ukuba unqwenela ukufumana imveliso yakho kwenye indawo ngaphandle kwehotele yakho, nceda ubhale phantsi idilesi kunye nenombolo yefowuni yendawo oyichongeyo kwiiNqaku zoMyalelo)
nqakraza PayPal . nqakraza Qhubela kwi-PayPal. * Kukho i-5% intlawulo yekhomishini yePaypal.
* Ukubona inkqubo yePayPal, nceda ubone 'PayPal'.
Jonga i-imeyile yakho ukuze ufumane irisithi.
Imveliso yakho iya kukulindela kwidesika yangaphambili okanye kwigumbi lakho ehotele.
Nceda ujonge iodolo yakho ngaphambi kokuba uqhubeke uyokuthenga.
Ukuba sele unayo iakhawunti yePaypal, nceda uqhubeke uyokuthenga.
Ukuba eli lixesha lakho lokuqala usebenzisa i-PayPal, kwaye awunqweneli ukwenza i-akhawunti ye-PayPal, nceda ulandele apha ngezantsi.
1. Cofa ku-Pay nge-Debit okanye ngeKhadi letyala.
2. Cofa ilizwe lakho.
3. Gcwalisa iinkcukacha zakho zeKhadi kunye nedilesi yeNtlawulo.
4. Cofa kuVumeza (ibhokisi yokujonga) kwaye ubhatale ngoku.
Kukho i-5% intlawulo yekhomishini yeP iintlawulo.
Jonga i-imeyile yakho ukuze ufumane irisithi kunye nevawutsha.
(Siza kukuthumela ivawutsha ngaphakathi kwemini yshishini ye1 yezinto eziza kwenziwa nangaphakathi kweentsuku zeshishini ze2 zetyelelo lePhakheji)